Mmekọrịta bụ sistemụ ngwakọ nke na-arụ ọrụ dị ịtụnanya. Ọ bụrụ na ASR enweghị ike ịghọta azịza ya, a ga-eburu ya gaa na Ndị nyocha. Ndị a bụ ndị ọkachamara na-ejikwa ọtụtụ akụkọ na-ejide njide nke usoro ahụ enweghị ike ịmata. Nsonaazụ njedebe bụ ahụmịhe ọhụụ ngwa ngwa maka ndị ahịa! Kama ịme ka ị kwugharịa ugboro atọ ma kwụsịzie ijide gị… Ndị Ebumnuche Ebumnuche na-ege ntị n'ozi gị ma dezie ya n'ụzọ kwekọrọ.
Enweghị m ike ị banye na nkọwa, mana usoro ntụgharị na njikwa maka ndị nyocha intanet ga-eme ka uche gị daa. Ọ dị mma, nwere nyocha nyocha, yana ụgwọ ọrụ oge nzaghachi ọsọ ọsọ. Centerslọ ọrụ oku nwere ike ịrụ ọrụ na ntakịrị akụkụ nke akụrụngwa ma mezie oku ndị ọzọ ensuring ma hụ na ihe ziri ezi na afọ ojuju ndị ahịa. Pịa ma ọ bụrụ na ị hụghị Hey Otto vidiyo.
Akpọrọ m n'ime Pizza dị ọkụ usoro yana - ọ bụ ịrịba!